Dhuuso marreeb oon xalay laga seexan iyo Alshabaab oo kaabiga ku haysa. – Shabakadda Amiirnuur
Dhuuso marreeb oon xalay laga seexan iyo Alshabaab oo kaabiga ku haysa.
October 1, 2020 4:21 am by admin Views: 61
Walaac daran ayaa xalay soo wajahay Madaxda Maamulka Galmudug ee ku sugan Magaalada Dhuuso Marreeb ee Gobalka Galgaduud ka gadaal markii Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin soo gaareen deegaano kaabiga ku haya Magaalada lagana baqay in ay gudaha u soo galaan kadibna ay bilaabaan dagaal iyo in ay beegsadaan madaxda magaalada ku sugan.
Alshaabab ayaa shalay tegay deegaanada Siinka dheer iyo barkhadle oo u dhaw Magaalada dhuuso mareeb iyagoo isku fidiyay wadada Laamiga ah ee isku xidha Dhuuso Mareeb iyo Guriceel taasuna waxay kordhisay welwelika iyo walaaca magaalooyinkaas ka jira gaar ahaan dhuusso marreeb.
Ciidamada Dowladda Federaalka ah iyo kuwa jabuuti iyo kuwa Galmudug oo awalka keeb la yuurar ahaa ayaa la siiyay amaro hor leh waxaana loo sheegay in ay u toog haayaan dagaalo kaga imaan kara Xarakada Jihaadiga ee Alshabaab oo maamusho qaybo badan oo ka tirsan kenya iyo Soomaaliya.
Garoonka dhuuso marreeb iyo goobaha kale e muhiimka ah ayaa ciidamada la soo dhoobay xalay oo idilna dhegta ayaa u taagneyd siyaasiyiinta dhuuso marreeb ku sugan iyadoo mid waliba isweydiinayay goorta xabaddu ay bilaaban doonto ama Albaabka guriga uu ku jiro la soo jebi doono.
Dhawaan ciidamada dhinacyadaan waxaa dagaal ku dhex maray deegaan dhanka bari ka xiga magaalada laakiin iminka waxay Waxay xoogaga Alshababaab ka soo muuqdeen jiho aan laga filayn taasoo keentay in walaacu laab kacleeyo.
Waxaa suura gal ah in Maamulka galmduug u qayla dhaan hor leh u dirsado shisheeyaha uuna ka codsado in ciidan lagu soo kordhiyo ama qarash iyo hub hor leh la siiyo si uu u difaacdo dhuuso marreeb.
Dhawaan wasiirka amniga ee Galmudug Axmad Fiqi ayaa sheegay in ay ku duulayaan deegaanada Alshabaab ka taliayan laakiin iminka Alshabaaa Kulaaleysa Caasimadda Maaamulka iyo deegaano kale.
Dhegeyso Alsahabaab oo soo bandhigtay askar isu soo dhiibtay
Xaalad cakiran oo puntland ka taagan